फोहोरमैला व्यबस्थापन – Page 80 – WASHKhabar
फोहोरको दुर्गन्ध फैलिने ठाउँमा फूलको सुवास : यसो भन्छन् ‘भक्तजन’ (भिडियो)
दिक्पाल गिरी, काठमाडौ २४ वैशाख । वाग्मती सफाइ महाअभियानले चार बर्षको सफल यात्रा पार गरेको छ । २०७० साल जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएकोले हिजो मात्र २०८ औं हप्ताको सफाइ गरेको छ । सफाइ अभियन्ताले वाग्मती सफाइ गर्न थालेपछि वाग्मती पहिलेको भन्दा सफा हुदै गएपछि नदी किनारमा पूजाआज गर्ने भक्तजन पनि बढेका छन् । हेर्नुहोस् दिक्पाल गिरी...
वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४ बर्ष पूरा
काठमाडौ २३ वैशाख । वाग्मती सफाइ महाअभियानले चार बर्ष पूरा गरेकोे छ । वाग्मती सफाइ महाअभियान २०७० साल जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको हो । यही अवसरमा ‘बाग्मती सफाइ महाअभियानले ग-यो चार बर्ष पूरा, अब गर्नुप-यो, नयाँ, पृथक, प्रविधियुक्त लक्ष्य सहितको कुरा’ भन्ने नाराका साथ २०८ औ हप्ताको सरसफाइ गरिएको छ । ‘हामीले चार बर्ष लामो गौर...
नझुक्किनुहोस् ! यो वाग्मती किनार नै हो (भिडियो)
काठमाडौ २३ वैशाख । ‘वाग्मती सरसफाइ महाअभियान शुरु नभएको भए वाग्मती यत्तिबेला फोहोरले नै पुरिसक्थ्यो होला ?’ आजकल वाग्मतीको चर्चा चल्ने वित्तिकै धेरैजसो मानिसहरु यसै भन्न थाल्छन् । त्यत्तिबेलै ढल मात्र बग्न थालेको वाग्मतीको नाम समेत ढलमती भइसकेको थियो । तर वाग्मती सफाइ महाअभियानले वाग्मतीको स्वरुप यसरी फेरिदै गएको छ कि ...
धौलागिरी हिमालको आधारशिवीरमा थुप्रिएको फोहोर, क्लवले हटाउने
म्याग्दी २२ वैशाख । धौलागिरी हिमालको आधारशिविरमा थुप्रिएको फोहोर राउण्ड धौलागिरी युवा क्लव मुदीले हटाउने भएको छ । धौलागिरी गाउँपालिका–४ मुदीमा पर्ने धौलागिरी हिमालको आधार शिविरमा बर्षौदेखि आरोहीले फालेका फोहोर थुप्रिएको प्रति आफूहरुको ध्यानाकार्षण भएको क्लबका अध्यक्ष दिलबहादुर पुनले बताउनुभयो । क्लबले हालै धौलागिरी आधा...
वाग्मती सफा हुँदै गएपछि यस्तो दृश्य देखिन थाले ( भिडियो )
दिक्पाल गिरी, काठमाडौ २१ वैशाख । केही समय अघिसम्म वाग्मती किनारको बाटो कहिल्यै हिड्न नपरोस् भन्नेहरु नै हिजोआज वाग्मतीमा पुग्ने गरेका छन् । वाग्मती सरसफाइ महाअभियानबाट सङ्लिदै गएको वाग्मतीमा पूजाआजा गर्न, घुमफिर गर्न र अन्य उद्देश्यले समेत जाने गरेका छन् । हेर्नुहोस् यो भिडियो : वाग्मतीमा पूजा गर्दै गर्नुभएकी रीना प...
वाग्मतीमा ढल पाइप विछ्याउन आधा किलोमिटर मात्र बाँकी
लिखिता बराल, काठमाडौ २१ वैशाख । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मतीको दुवैतर्फी ढल विछ्याउने काम सक्नै लागेको जनाएको छ । गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको दुवैतिर २८ किलोमिटर मध्ये साढे २७ किलोमिटर ढल विछ्याइसकेको समितिका आयोजना प्रमुख राजेश प्रसाद सिंले जानकारी दिनुभयो । ‘ढल विछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगे...
सेनाले गरे, पर्यटकीयस्थल रुपाकोट डाँडाको सफाई
खोटाङ १९ वैशाख । खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलबाट ३ घण्टाको पैदल यात्रापछि पुगिन्छ पर्यटकीय स्थल रुपाकोट डाँडा । नयाँ वर्ष, उभौली, उद्यौली लगायतका चाडपर्व र पिकनिकका लागि रुपाकोट पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले जथाभावी फोहोर फ्याँक्दा रुपाकोटको प्राकृतिक स्वरुप पूरै विग्रन थालेको थियो । पर्यटकीय स्थल विरुप हुदै गएपछि से...
जथाभावी फोहोर फाल्दा पर्यटकीय स्थल डम्पिङ साइटमा परिणत
खोटाङ १७ वैशाख । सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा जिल्लाका पर्यटकीय स्थलमा फोहरमैलाको डङ्गुर थुप्रिन थालेको छ । जिल्लाका पर्यटकीयस्थलहरू टेम्केडाँडा, रूपाकोटडाँडा, मझुवागढी, भुम्जुडाँडा, बाँझोबारी लगायतका ठाउँमा नसड्ने किसिमका फोहरमैला थुप्रिन थालेको हो । चारैतिरबाट वनजङ्गलले घेरिएको रूपाकोटको हरियो चौरमा यत्रतत्र बिस्कु...
इलाममा सुरु भयो, सरसफाइ अभियान
इलाम १७ वैशाख । युुवा सूचना केन्द्र इलामले सरसफाइ अभियान सुुरु गरेको छ । हिजो इलाम टुँडिखेल सरसफाइ गर्दै अभियानको उद्घाटन गरिएको सूचना केन्द्रका अध्यक्ष सचिनजङ्ग रायमाझीले जानकारी दिनभयो । हिजोको सरसफाइमा १७ जना केन्द्रका सदस्य सहित स्थानियले सहभागिता जनाएका थिए । अभियान अन्तर्गत प्रत्येक महिनाको एक शनिवार जिल्लाका कुु...
कहाँ तुहियो, गाडीमा अनिवार्य डस्टविन राख्नुपर्ने नियम ? (भिडियो)
काठमाडौ १७ वैशाख । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा फोहोर संकलनको लागि तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको पोलिथिन थैलो वा डस्टबिन अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम लागु गरेको पाँच महिना हुनै लाग्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन । सार्वजनिक गाडीभित्र हुने फोहोरमैलालाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न सरकारले यही पुस १ गतेदेखि हरेक सार्वजनिक यातायातमा...